सबैका आँखा सर्वाेच्चतिरै - नेपालबहस
सबैका आँखा सर्वाेच्चतिरै
११ फागुण २०७७ | १४:२७:०२ मा प्रकाशित
११ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर होला की बदर ? धेरैको जिज्ञाशा यही प्रश्नमा रहेकोछ । सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्धाको सुनुवाई सकेर अहिले हेर्दाहेर्दैमा पेशी चढेकोछ ।
आजको संवैधानिक इजलाशले कानून व्यावसायीहरुले पेश गरेको वहस नोट अध्ययन गरेपछि अन्तिम फैसला हुने गरी तयारी भएको सर्वाेच्च स्रोतले बतायो ।
फैसला के होला ? धेरैले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुने नै अनुमान गरेकाछन् । किनभने संविधानमा नभएको अधिकार र धेरै वकिलहरुले गरेको वहस पैरवीले त्यही संकेत गरेकोछ । कतिपयले चाहिं फ्रान्सेली विद्वान मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको राज्यका तीन अंगको अधिकार क्षेत्र र सन्तुलित सम्बन्ध खल्बल्याउने काम नहुने लख काटेकाछन् ।
यस्तो अवस्था आयो भने त राजनीतिक रुपमा फेरि द्वन्द्व बढ्ने र सडक आन्दोलन चर्किने अनुमान समेत गरिएकोछ । तर यसै होला भन्ने अनुमान गर्न भने सहज छैन ।
कतिपयले भने सर्वाेच्च अदालतले तेस्रो विकल्पमा समेत फैसला दिन सक्ने बताएकाछन् । जसमा ्दलहरुबीच सहमति कायम गरेर निर्वाचनमा जाने गरी फैसला हुन सक्ने अनुमान गरिएकोछ ।
तर, रिट निवेदक र विपक्षीले यस्तो माग दावी नगरेकोले सर्वाेच्च आफूखुसी जान नसक्ने जानकारहरुको भनाईछ । बाहिर विभिन्न खाले अड्कलबाजी गरिएको भएपनि स्थिति सहज भने नभएकै विज्ञहरुको बुुझाई रहेकोछ ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा भने अब लामो समय अल्झाउने पक्षमा छैनन् । जे भएपनि छिट्टै निर्णय गर्न उनी हतारिएकाछन्् । किनभने फागुन १४ गते उनी एउटा अन्तराष्ट्रिय सेमिनारमा भाग लिन अमेरिका उड्ने कार्यक्रम रहेकोछ । फैसला गरेलगत्तै उनी विदेश जाने भएकाले सम्भावित प्रतिक्रियाको सामना गर्न नपर्ने भएकोछ ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो कदम सदर गर्ने विश्वासमा देखिएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा भने ओली प्रतिकूल निर्णय आउने संत्राशमा रहेकाछन् । त्यसैको अभिव्यक्ति स्वरुप उनले गएको सोमबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सदर नभए सर्वाेच्च अदालत विरुद्ध आन्दोनल गर्ने भनेका थिए ।
साथै, हिजो कञ्चनपुरमा समेत ओलीको बोली खस्किएको थियो । त्यहाँसमेत ओलीले पुनःस्थापना भएपनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताएका थिए । साथै, अदालतलाई आफूले धम्की नदिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
उता, प्रचण्ड –माधव पक्ष पनि पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्कै देखिएकाछन् । पुनःस्थापना भएपछि अहिले ओली खेमामा रहेका कम्तिमा दुुई दर्जन सांसद् आफूहरुतिर फर्कने विश्सासमा रहेकाछन् । यस्तो अवस्थामा ओलीलाई कमजोर बनाउन यो समूहले कांग्रेस वा जसपालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सम्भावना रहेकोछ ।
तर, ओली पनि सहजै गल्ने अवस्था छैन । उनी प्रधानमन्त्री मात्र नभएर अघोषित राष्ट्रपतिसमेत हुन् । त्यसैले ओलीलाई कमजोर आँक्ने काम गलत सावित हुन सक्छ ।
जे भएपनि अबको दिन नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा फेरिपनि अस्थिरता र अन्योलको श्रृङ्खला भने सुरु भएकोछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मूल जिम्मेवारी फेरिपनि नेपाली कांग्रेसकै काँधमा रहेको छ । त्यसका लागि कांग्रेसको तयारी भने गतिलो देखिएकोछैन ।
बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै २ दिन पहिले
मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि २ मिनेट पहिले
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ६६ करोडको आईपीओ फागुन २३ गतेदेखि निष्कासन हुने २६ मिनेट पहिले
प्रोत्साहन अभियानले दुई वर्ष बाँझो रहेको जग्गा खेतीयोग्य बन्दै ५८ मिनेट पहिले
नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम तीव्र रुपमा २१ घण्टा पहिले
तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन वामदेवकाे माग २ दिन पहिले
मापदण्डविपरीत व्यवसायीले बगर उत्खनन गर्दै २२ घण्टा पहिले
कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम राख्छौ २ वर्ष पहिले
नौ करोड सदस्य भएको कम्युनिष्ट पार्टी २ वर्ष पहिले
पशुपतिनाथमा हराएका २३३ लाई आफन्तको जिम्मा १२ महिना पहिले